Previous NDI UWEOJII JIDERE ONYE OHI, ÒTÙ NZUZO NA EJIGBO
Next INSTAGRAM MODEL MCNAMARA NWURU NA YATCH NA MEXICO
AKUKO UWA, Hot News, Local News, NDORO NDORO OCHICHI
Onye isi America Bank, Jim Yong Kim na-anọchi anya maka okwu nke abụọ, nke Ngalaba Ntuzi nke United States kwadoro ya.
N’ikwekọ na ọdịnala a na-agbanyeghị aka, onye nnọchiteanya US ga-ejigharị onyeisi oche ọzọ na Bank World, ebe Ego Fund Monetary na-anọgide na Europe dịka Christine Lagarde, bụkwa nke a na-emeghị ka ọ malite, malitere okwu nke abụọ dịka onye nduzi na July.
Mgbe nhoputa mepere, Treasury US nyere nkwado ya maka okwu nke abụọ maka Kim, na-enyere aka ịkụda ikike ọ bụla ọzọ.
Òtù Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ụlọ Ọrụ Ụwa nke ọnwa gara aga katọrọ ihe ọ kpọrọ “nsogbu nke nduzi,” na akwụkwọ edemede nke ọtụtụ ndị isi na-akwa ụta maka ihe ha kwuru bụ enweghị usoro doro anya. The Economist na Financial Times eguzogidere na mberede na -eme Kim ma na-akpọ maka usoro mmeghe.
N’agbanyeghị nke a, mba ndị dara ogbenye na mba ndị ka na-emepe emepe ka họọrọ ịkwado okwu nke abụọ maka Kim, 56, bụ ndị ga-anọdụ ala iji nyochaa ọnụ ụlọ Bank ahụ tupu a chịa ya okpueze ọzọ n’ọnwa ọzọ.
Oge nke abụọ nke afọ ya ga-amalite na July n’afọ ọzọ.
Otu onye na-ahụ maka mgbasa ozi na-ere ahịa, China na-eto eto na “ọganihu ma na-edu ndú” Kim, ọ bụrụgodị na Beijing kwadoro ịmepụta ụlọ akụ aka ya iji merie Ebe Ọdịda Anyanwụ Ụwa nke Bank World na IMF.
NDOMA-EGBA GARA NLETA EZINULO NKE NDDC MD KEMBU
“Mba ndị otu a na-enwe obi ụtọ na foto zuru ụwa ọnụ nke Bank World na ha achọghị ịgbanwe nduzi ya n’oge a ọbụna ma ọ bụrụ na e nwere ihe ịma aka na-arụ ọrụ n’ime ụlọ ma ọ bụrụ na mmụọ dị ala,” ka Ian Solomon, onye bụbu onye US onye nduzi isi na Bank na onye isi oche nke SolomonClobal siri ike.
Ndị nkatọ nke Kim na-atụ anya na mba ndị otu a ga-ama ma ọ dịkarịa ala mara na obi anaghị eru ha ala.
Mba mba ọzọ weere ihe ize ndụ nke ịgbalị imebi usoro a guzosiri ike – n’adịghị ka afọ 2012, mgbe Ngozi Okonjo-Iweala Naijiria tụbara okpu ya na mgbanaka ka ọ bụrụ onye ndú nke behemoth mmepe, nke gụnyere 189 mba ndị otu na-eji 15,000 mmadụ.
Otu dọkịta na onye isi oche nke Dartmouth College, Kim meriri ihe ndị a na-eme maka ịkwado Bank ahụ megide ọrịa Ebola nke dị na West Africa na ime ihe megide mgbanwe ihu igwe, nakwa maka ịmepụta ihe mgbaru ọsọ nke iwepụ ịda ogbenye kpamkpam n’afọ 2030 niile ka ha na-amụba Ego Ụwa agbazinye.
Ma o ghaghi inwe mgbagwoju anya nke nkwekorita onwe ya, nke sitere na nchigharia ndi mmadu na ndi mmadu n’agbaghara na afo 2014 banyere ego ndi ozo nyere ndi isi ulo ochi Bank.
NDI UWEOJII JIDERE ONYE OHI, ÒTÙ NZUZO NA EJIGBO says:
[…] NA-EGOSI Next JIM YONG KIM MAKA OKWU NKE ABUO NA ULO AKU UWA Hot News, Local […]